CryptoKittie, CryptoKitties, download, downloads, free, ciyaarta, kulan, Ciyaarta, Kryptokťátka, download, download, free
Caanno aan horay loo arag waxay ku raaxeeyso ciyaarta cusub ee CryptoKitties, oo si xor ah loo turjumo sida CryptoKitty. Cinwaanka waxaa lagu bilaabay aduunka internetka kaliya usbuucii tagay talaadadii, iyo todobaadkii ayaa kasbadey abuurayaasha $ 3 malyuun, ama ku dhawaad ​​65 malaayiin taajir ah.
Waa ciyaar aad u xun. Isticmaalayaasha ayaa iibsada qaniinyo ficil ah waxayna daawataa sida ay u koreyso.
Magaca "crypt" waxaa laga helaa magaciisa sababtoo ah waxaa loo baahnaan karaa in lagu hormariyo cayaarta kubadda cyber -ka ka dambeysa qaylo-dhaan ee ethereum. Tani waa beddelaad bacriga caanka ah, halka lacagta lacagta euro-da ahi ay isbeddelayso lacagta dhabta ah.
In badan oo ku saabsan ciyaarista GamesChat.online